Nanao be midina tao amin'ny tsena Antanifotsy Sambava ny avy amin'ny sampandraharahan’ny Indostria sy ny varotra ary ny Asa tanana tato amin'ny Faritra SAVA omaly 18 febroary 2020.
Nisava ireo mizana izay maro no hita fa tsy niatrika fitsarana, hany ka lasa mizana mitongilina mamono antoka ny mpanjifa no tazana. Noraofina avokoa ary nentina any amin’ny birao mba hahafahana manamboatra azy.
Nisy ihany ireo izay mba nandray anjara tamin’ny fitsarana ny mizana saingy rehefa mivarotra izy dia ilay tsy vita fitsarana no ampiasainy, ary tao kosa ireo izay nitsoaka fotsiny izao.
Mitaraina ny mpajifa fa tsy vitany vidin-javatra miakatra fa mbola voafitaka amin’ireo mizana mitongilana ka nidera izao fisavana izao.
Voasazy handoa 10 000Ar ny « droit » ary manomboka eo amin ny 100 000Ar kosa ny fanamboarana isaky ny mizana tsy manaraka ny fenitra na tsy vita fitsarana.
Nihaona tamin’ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, Assoumacou Elia Béatrice tao amin’ny biraony eo Fiadanana, omaly 18 febroary, ireo Raiamandreny avy ao amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany.
Niaraha-nidinika ny fomba hanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana sy hanomezana sehatra mampiroborobo ny kalitao, sy mitsinjo ireo mpianatra. Anisan’izany ny fanatsarana ny sampana fampianarana izay sahanin’izy ireo ao amin’ny IST Manakara, miompana indrindra amin’ny fambolena sy fiompiana.
Vonono ny hifanome tanana amin’ny fanatanterahana ireo dingana rehetra ho fanatsarana ity sekoly ambony ity ny ministera.
Jean-Yves Le Drian: Hitsidika ny Rova Antananarivo mandritra ny diany eto
Fenofeno ny fandaharam-potoanan’i Jean-Yves Le Drian, minisitra frantsay misahana an’i Erôpa sy ny raharaham-bahiny izay ho avy hitsidika an’i Madagasikara amin’ity herinandro ity.
Hihaona amin’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina sy ny mpitondra ambony malagasy izy, hanao jeritodika ny fiaraha-miasa eo amin’i Frantsa sy Madagasikara.
Handalo ao amin’ny lapan’ny tanànan’Antananarivo i Jean-Yves Le Drian, avy eo hiaraka amin’ny Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina hitsidika Rova Antananarivo, izay andalam-panarenana amin’izao fotoana izao, ary orinasa frantsay rahateo no manatanteraka ny asa.
Mifankalala ny roa tonta satria efa nihaona fony Naina Andriantsitohaina minisitry ny raharaham-bahiny malagasy.
Hidina ifotony hijery ireo tetikasa vatsian’ny AFD (Agence Française de Développement) vola ihany koa ity lehiben’ny diplaomasia frantsay ity. Hitsidika ny Institut Pasteur eny Avaradoha aorian’izay dia hihaona amin’ireo Frantsay miasa sy monina eto Madagasikara.
mercredi, 19 février 2020 15:08
Kolontsaina: Manao fihaonambe ny mpamorona, mpikambana ao amin’ny OMDA
Manatanteraka fivoriambe etsy amin’ny Espace Dera – Tsiadana Antananarivo ireo mpanakanto mpamorona, mpikambana ao amin’ny OMDA (Office Malagasy du Droit d'Auteur).
Fanao isan-taona, isaky ny alarobia fahatelo amin'ny volana febroary, ny fihaonamben'ny mpamorona anaovan'ny filankevi-pitantanana tatitra ny asa natao nandritra ny taona 2019. Misy koa ny volavolana didim-panjakana hanatsarana ny fisitrahana ny zon'ny mpamorona.
Fihaonana voalohany amin’ity taona 2020 ity io, ka sady fifampiarahabana nahatratra ny taona vaovao ihany koa.
« Forum de la diaspora Malagasy » : Hatao amin’ny volana aogositra ny andiany faharoa
Hanatanteraka fihaonambe eto Antananarivo ireo Malagasy mila ravinahitra any ivelany. Hatao ny 07, 08 ary 09 aogositra 2020 izany.
Andiany faharoa ity, taorian’ny natao teny amin’ny « Village Voara » Antananarivo ny 26, 27 ary 28 oktobra 2017.
mercredi, 19 février 2020 14:58
Feo nidoboka mafy no nanaitra ny manodidina teo Ambongo, manaraka ny lalam-pirenena faha-25, androany tokony ho tamin’ny 7ora sy sasany maraina. Fiara 4x4 nitondra vazaha no nifatratra tany an-tranon’olona teo amoron-dalana no hita nony avy eo. Niala lalana ilay fiara, avy eo nifaoka trano telo, ka tao amin’ny fahatelo vao tafajanona.
Raim-pianakaviana saika hivoaka hanavotr’aina vao naheno feo hafahafa nandritra ilay fiara nifaoka ny trano voalohany no voadona ary naratra mafy. Nifitsaka teo amin’ny zoron-trano ramatoa vadiny sy ny zanak’izy ireo vao herintaona tavela tao an-trano, ary nieren-doza.
Tsy nisy aina nafoy. Nentina namonjy hopitaly ny naratra.
Hery Rajaonarimampianina: Notendren’ny Vondrona Afrikanina hitarika iraka mpanara-maso fifidianana filoham-pirenena any Togo
Hiatrika fifidianana filoham-pirenena ny ao Togo ny 22 febroary 2020 izao. Notendren’i Moussa Faki Mahamat, filohan’ny Vaomiera Afrikanina, ho lehiben’ny MOEUA (Mission d’Observation Electorale) izay iraka mpanaramaso io fifidianana any Togo io ny filoham-pirenena malagasy teo aloha, Hery Rajaonarimampianina.
Efapolo ny mpikambana mandrafitra ny delegasiona, ahitana ambasadaoro miasa eo anivon’ny Vondrona Afrikana, Parlemantera, rafitra mpikarakara fifidianana, fiarahamonim-pirenena ary ivontoerana akademika afrikanina.
Hanao tatitra mikasika ny zotram-pifidianana sy ny fandehan’ny latsabato ny MOEUA aorian’ny 22 febroary.
mercredi, 19 février 2020 12:36
Fantatrao ve: Tsara sa ratsy ny mitrosa?
Misy ohabolana malagasy manao hoe: "Izay hafa-trosa no manan-karena", izany hoe izay mahaloa trosa ka tsy ananan'ny olona trosa no manan-karena.
Misy indray ohabolana japoney hoe: "Un homme sans dette n'est pas un homme", izany hoe ny lehilahy tsy ananan-trosa dia tsy lehilahy.
Izany hoe misy resaka kolotsaina ihany koa izany ity resaka trosa ity.
Fa eto dia trosa ara-bola no asiantsika resaka, ka avy aiza marina moa izany ny vola, ahoana ny tantarany, ary inona no niandohany?
Fahiny dia fifanakalozana no nisy, izay manana vary, atakalo omby, izay manana tsaramaso atakalo lamba.